Nezvedu - Ikkaro
Zita rangu ndinonzi Nacho uye ini ndiri Injiniya weindasitiri na UPV (Polytechnic yunivhesiti yeValencia)
Mune ino webhusaiti ini ndichaenda kuzokurukura misoro yakagara ichindifarira uye yandisina kumbobvira ndapindamo, nekuda kwekushaya nguva nemari ...
Kunyangwe chiri chokwadi kuti izvozvi handina nguva kana mari, asi ini ndine chishuwo chikuru, icho chinombobhadhara.
Saka ini ndichataura nezve:
Ikkaro akaberekwa muna Chikumi 2006… sechirongwa chekutaura nezvacho zvinobhururuka zvinhu; kites, boomerang, redhiyo-kutonga zvishandiso, Etc.
Saka zita rayo rine chekuita ne Icarus el mwanakomana waDaedalus, avo vakapunyuka kubva mutirongo ravo nemapapiro akagadzirwa neminhenga uye namo. Uye mukutiza kwake Icarus akatanga kukwira akananga kuzuva, kusvikira wakisi pamapapiro ake yanyungudika.
Dai akafunga kuti achazopedzisira ave zvaari nhasi, angadai akasarudza rimwe zita.
Mumazuva ayo ekutanga, takanyora zvinyorwa zvishoma uye ruzivo nezve kites uye boomerangs uye dandemutande rakasiiwa kweanoda kusvika makore maviri, kudzamara tatanga zvakare chirongwa ichi uye chave musanganiswa pakati bhurogu yekuita kana kuita sei uye nemhando dzese dzekuda kuziva uye mapurojekiti epamba.
Kana iwe uchifarira kuziva zvakawanda nezvedu, iwe une iyo Tsika chikamu, uye zvishoma nezvishoma isu tinonyorazve nhoroondo yedu.
Nhoroondo Ikkaro Logo
Munyori we ikkaro logo is Alejandro Polando (alpoma) kubva Chinyakare Technology, iyo yakakunda iyo logo makwikwi atinopemberera kuburikidza https://en.99designs.es/logo-design/contests/logo-blog-experiments-7757/entries
Mumashoko emusiki wayo, logo inomiririra
roketi rine bata rehucheche iro rinoda kuratidza musanganiswa weshungu uye naivety izvo zvinowanzodiwa kana zvasvika pakuita ese marudzi ezvigadzirwa zvemumba
Iwe unoda kuziva zvese nezve Ikkaro?
Yakavambwa muna2006 kuti itange kutaura nezvezvinhu zvinobhururuka, yakakurumidza kuve nzvimbo yekuburitsa zvese zvandaida nezve DIY, zvigadzirwa, mabikirwo uye trivia.
Muchikamu tinounganidza akateedzana ezvinyorwa kubva patakataura nezvewebhu, pane mashoma uye mashoma. Makore apfuura takataura nezvehuwandu, mazano emapurojekiti akadai seforamu, nharaunda, patakavhara foramu, patakadzoka munaKubvumbi uye kuivhara, hahaha, asiwo nezve raffle, vakundi vayo, nezvimwe.
Uye ndeye kuti anopfuura makore gumi kupa kune vakawanda, kuyedza zvinhu zvakawanda uye kuona izvo zvisingashande uye chii chinofanirwa kuchinjwa. Kana kungovhara zvinhu izvo iyo nguva yanga isina kukodzera.
Kana iwe uchida kuziva nezve chirongwa ichi, svetuka zvishoma mune izvo zvatinokusiira uye kana uine chero mubvunzo, usazeze kubvunza ;-)
Ini handizive kana nhasi chikamu ichi chine musoro kana kana zvirinani kusiya zvese zvakanaka zvakarukwa uye kuvharwa mune imwechete posvo uye kugadzirisa sezvazvinodiwa. Ndiri kuzopa izvi kutenderera kana ndikaita nyaya hombe yeIkaro mumakore gumi nemaviri neaya anosara
Pano une nhoroondo yedu, nhamba, vashandi ... Zvese nezve zvatiri
Isu tanga tichishanda pane chirongwa chitsva kwenguva yakareba uye isu tinogona pakupedzisira kuita pre-kuburitswa.
Uyu ndiDeddalus, a imba yekutsikisa yakanangana ne DIY, maitiro ekuzviita, zviite iwe pachako, sainzi uye tekinoroji.
Isu tinotenda kuti pane kushaikwa kwakakosha kwerudzi urwu rwezviri mukati medu mutauro uye isu tinoda kupa mabhuku uye monographs pa DIY, sainzi uye tekinoroji, yemhando yepamusoro uye nehukuru hwakanyanya.
Mukushaikwa kwekusimbisa iyo katarogu, tinogona kutaura pane akati wandei akakosha mapoinzi.
Ese mabhuku / monographs ichave isina DRM
Kune chero bhuku rikatengwa, unokwanisa kuwana chero zvemagetsi mafomati atinozvitsikisa (pdf, epub, mobi, nezvimwewo) uye kune chero gadziriso yatinoita.
Pamusoro pekutengesa kwega kwega, isu tinoshanda pamwe nekunyoresa zvakachipa kwazvo kwegore
Kana iwe uchida kuziva nezvenhau dzese kubva kumuparidzi. Pinda Deddalus uye Nyorera kunhau.
Chero mibvunzo yauinayo unogona kutinyorera contact@deddalus.com
MuIkaro tine maakaundi akavhurika mune chikuru pasocial network. Hatitumire zvakafanana pane ese masocial network. Imwe neimwe ine ecosystem yayo uye isu tinoenderana nezviri mukati zvinotikodzera zvakanyanya.
Apa ndipo patinonyanya kushanda
Tiri kutarisa nemaziso akanaka
Isu takagadzira semuyedzo kunyangwe isu tisingashandise izvozvi.
Ukasuwa chero chaunotora uye / kana uchida kukurudzira shanduko. Siya mhinduro.
Munguva yeanopfuura makore manomwe ehupenyu, ino blog yakawana shanduko zhinji, zhinji padanho rekugadzira uye mashandiro, asi ichigara ichishanda naDrupal.
Ino nguva zvinhu zvave zvakakomba zvakanyanya. Isu tachinja maneja wezvemukati kubva Drupal kuenda WordPress.
Ndinoziva kuti izvo vateveri veIkaro vanofarira ndezvekuti zvemukati zvemukati zvinoramba zvichipiwa uye zvakanyanya kazhinji. Saka ruzivo uye zvikonzero zvekutama zvinosvika kumagumo echinyorwa. Heano mavandudziro atakaisa uye neavo atinotarisira.
Chii chaunotarisira kubva ikozvino?
Kutama kwakatora nguva yangu yakawanda. Kubva ikozvino zvichienda mberi uye kunyangwe tichifanira kuramba tichipolisha "ruzivo" ndinovimba tangazve kutsikisa zvinyorwa.
Pfungwa mukati megore rino kuwedzera mukuenderera kutsikisa ichave wongorora iyo "lazier" zvemukati meblog uye nyorazve, wotaura pamusoro payo kana mune zvinyorwa, uvandudze. Saka kuti chero chinyorwa cheIkaro chinonakidza kwazvo.
Chinhu chinonyanya kushamisa ndechekuti makomendi anoshanda zvakare. Pasina kupokana nhau hombe dzatakarasa kuti dzichiri kuongororwa musati dzatsikiswa.
Injini yekutsvaga inoshanda zvakare. Iri kumusoro kweblog.
Tine vhezheni nyowani yefoni uye piritsi zvakanaka chaizvo. Itarise ;-)
Nekutama isu tadzima foramu uye mapeji mazhinji akabva apo patakabvumira munhu wese kunyora uye haana kupa chero chinhu. Isu tasiya izvo zvinonakidza zvakabatanidzwa.
Tiri kuenda gadzirisa zvese zvikamu, tambanudza zvinyorwa uye gadzira chaiwo emapeji ekumhara kuratidza zvirimo nenzira yakarongeka uye kufambisa kushandiswa kwesaiti.
Tinotenda kuti dambudziko remifananidzo rakagadziriswa nekunyoreswa kwenhau renhau. Nyorera kana iwe uchida uye unogamuchira muemail yako nhau dzatiri kutsikisa
Tine zvakawanda zvakawanda zvekuvandudza. Zviri nyore kwauri kuti uwane zvinhu zvisinganzwisisike, kutama hakumbori nyore kunyanya kune makuru masosi saka hongu iwe rondedzera matambudziko Ndichazvikoshesa.
Kana iwe ukasatiteverera pasocial network iwe unogona kudaro, isu tinopa zvakasiyana zvemukati pane yega yega social network :)
Isu takangotanga chirongwa che flipboard magazini yakatsaurirwa kuna DIY.
Nezve kutama kubva kuDrupal kuenda kuWordPress
Kune avo vanofarira izvi zvese zvinhu. Hongu, pakupedzisira ndinosiya mudiwa wangu Drupal. Iyo blog yakave kuburikidza Drupal 5, 6 uye 7 uye ini ndadzidza nekuita yakawanda pa-saiti kuyedzwa (kukanganisa kukuru)
Mukupedzisira, mamaneja zvishandiso uye isu tinofanirwa kushandisa iyo inonyatsoenderana nezvatinoda. Izvo zvinonyanya kukosha ndezvedu zvatinoita nemidziyo iyi nemikana yavanotipa. Isu tinoshandura kuWordPress:
kutora mukana unoziva sei Mashoko Blog. Ndinoshanda pano. Isu tinobata mazana maviri mablog, ese mune izwi rezwi uye isu tine timu yevanogadzira, maSEO, uye nyanzvi mune dzakasiyana misoro avo vakazvipira kupuruzira nekuenderera mberi nekuvandudza mablog uye izvo zvaunoda kuti ndikuudze, zvinonyadzisa kutambisa ruzivo rwese urwu ndinofanira kutsvaga hupenyu hwangu kuti ndidzidze kuzviita muDrupal.
Nekuti pane rumwe ruzivo uye rubatsiro mune zvese Spanish neChirungu. Zvinotora zvakawanda kuwana zvimwe zvinhu zveDrupal uye zvakawanda kukubatsira iwe. Ini handisi mugadziri kana dhizaini, kana chero chinhu chakadai uye ndinofanira kutsvaga hupenyu hwangu kuti ndivandudze blog. Uye kunyangwe ini ndichiri kuda Drupal, chokwadi ndechekuti iko kuve nyore kweshokopress ipfungwa huru mukumufarira.
Kutama kwacho kwave kunonoka uye kuchirwadza. Ndakaita kutama kwakawanda kubva kuDrupal kuenda kuWordPress, nguva dzose kubva kune imwechete-mushandisi mablog uye ine imwechete mhando mhando. Zvakare nguva dzose Drupal 5.x uye 6.x ku wordpress 3.x asi naDrupal 7 ndanga ndine matambudziko uye yakasanganisa zvirimo nemazita uye nevanyori, pamusoro pekunge tichifanira kubata maurls, atisina zvoga.
Yakawanda yebasa remaoko asi ini ndinofunga mhedzisiro yanga ichikosha.
Nhasi manheru pa00.00 nguva yakatarwa yekutumira marogo emakwikwi yapera uye ivo vachiri kutitumira.
Chokwadi ndechekuti vazhinji veavo vakatumira vakanaka kwazvo uye ndinoda kukubvunza kuti ndeipi kana yaunoda zvakanyanya. Mune mamwe mazwi, inosangana neiyo blog uye foramu uye inomiririra zvishoma ino webhusaiti.
Ini ndinokusiira iyo 8 iyo kusvika parizvino ndainyanya kufarira. Iwo ari maererano nemaarufabheti kwete maererano nerekusarudza
3.- Vatongi vemasikati
6.- Jamie Shoard wechipiri
7.- Mukadzi Ligeia
8.- Siah Dhizaini
Unogona kuona ese marogo akatumirwa kubva ku http://99designs.com/contests/7757
Kana iwe uchida imwe isipo pano, unogona kupindura nezvazvo, kunyangwe zvakadaro mukundi achasarudzwa kubva pakati peizvi.
Kwazisai uye nekumberi pamberi pemaonero ako
3 comments pamusoro «Nezvedu»
Kukadzi 28, 2014 pa 2:23 ndiri
Mhoro, ini ndinoburitsa sei pane rako peji? kana ini ndinokutumira iwe info yepositi. Ndatenda
Kubvumbi 26, 2014 pa11: 22 am
Mhoroi, zita rangu ndinonzi Jose Luis uye ndinoda zvigadzirwa, ndagara ndichifunga nezvezvinhu, mazano nezvimwewo ... ndagadzira zvimwe zvandinazvo kumba senge yekudzoreredza mvura yekugezesa uye ndiro yekugezesa, muchina wangu.Marcianitos uye dzimwe pfungwa dzandisati ndawana kuti nditange nekuti handitarise zvakanaka navo, kana pano ndichigona kuzvitaura nekugovana navo ndinofunga ndinoda zvakawanda.
Ndira 19, 2016 pa9: 52 pm
Mhoro.Ndinovimba wapora.Ndiri kukunyorera kubva kuDominican Republic.uye pachokwadi ndiri mumwe weavo vanofarira chirongwa cheCCC ichi.Ini ndiri wevanhu.asi ini ndakapindwa muropa nekugadzira makabati nekugadzira .. ndiri kugadzirira kambani yangu neni takaita ingangoita michina yese ... ndinozviita nekuti ndinoda kuzviratidza pachangu zvandiri. Mari yanga isiri dambudziko kwandiri kutenga michina yese. Ini ndaigara ndichida kuzviita kubvira ini Ini ndakatoita hunyanzvi hwekusimbisa simbi .kugadzira michina yangu yese nesiginecha yangu. Uye ndinopika kwauri, mukomana akanaka ... ikozvino ngatidzikei kubhizimusi ... kana ndichida kugadzira michina imwe chete padanho remaindasitiri, ndedzipi mota dzemota dzandinogona kushandisa? Kizas zvakafanana? Asi nepamusoro voltage 220 -110v.